Archive du 20161221
Augustin Andriamananoro Naverina eny am-ponja
Nitana ny sain�ny maro ny raharaham-pitsaran�ny minisitry ny paositra sy ny fifandraisan-davitra tamin�ny andron�ny tetezamita Augustin Andriamananoro notanterahina teny Anosy omaly. Tsy nivoaka teo no ho eo ny didy fa amin�ny zoma 23 desambra izao.
Mananontanona ny fanonganam-panjakana Mitampikitra amin�ny tafika Rajao
Tsy kisendrasendra ny fanondrotana grady ireo miaramila maro be tamin�ny alalan�ny filankevitry ny minisitra ny alatsinainy 20 desambra lasa teo, ka 62 be izao no nakarina galona. Kolonely 17 kolonely nasondrotra ho general de brigade.
Fampihavanam-pirenena Tsy tokony hofaritan�ny lal�na, hoy ny Rarivato
Famaizana mandrava ny fihavanana no ambadiky ny lal�na, hoy ny minisitra teo aloha, Roger Marie Rafanomezantsoa, izay nanangana ny fikambanana Rarivato.
Mba mahandrasa andro zoma e !
Miarahaba ry Jean a ! Ahoana indray moa ireny fihetsikareo teny Anosy tsy mahandry ny andro zoma ireny ? Efa lazaina aminareo fa amin�ny zoma indray ny tohin�ny tantara saingy ianareo dia tsy manan-katao afa tsy ny migarigana.
Fanokafana ny �Festival Sambaraha� Tsy nipoitra ny PM Mahafaly Olivier
Miteraka resabe ao an-drenivohitry ny Faritra An�sy hatramin'izao ny tsy nanatrehan'ny praiminisitra Solonandrasana Mahafaly Olivier ny fotoam-panokafana ny �Festival Sambaraha� ny sabotsy 17 desambra teo.
Fanodinana ny fakon�Andralanitra Eo am-piketrehana azy ny kaominina
Nidina nijery ifotony ny olana sedrain�ireo fianakaviana miisa 300 mivelona ao amin�ny toby fanariana fako eny Andralanitra ny Ben�ny Tan�nan�Antananarivo Renivohitra Lalao Ravalomanana omaly notronin�ny tale jeneralin�ny SAMVA sy ny solontenan�ny Mompera Pedro.
Fitrandrahana ny harem-pirenena Fanina hatramin�ny manampahaizana
Resabe teo aloha teo ny mikasika ilay hoe 1% amin�ny tombony amin�ny fitrandrahana harena ankibon�ny tany ataon�ireo vahiny ihany no anjaran�ny fanjakana malagasy.
Kaominin�Antehiroka Nijolofotra ny � op�ration permis de construire �
Vitsy dia vitsy ireo nanohina ny antso tamin�ny hetsika nokarakarain�ny kaominin�Antehiroka tao anatin�ilay � op�ration permis de construire �
Lapan�ny Fitsarana Anosy Saika hisy handoro
Nisavorovoro ny teny amin�ny fitsarana Anosy omaly talata 20 desambra nitsarana an�i Augustin Andriamananoro.
ohitsara Analamahitsy Tapaka 5 andro ny rano
Nanomboka tamin�ny zoma teo aty amin�ny faritra Ambohitsara Analamahitsy izay misy ny � r�sidence d�Alg�rie � dia tapaka ny rano nanomboka tamin�ny zoma 16 desambra 2016 hatramin�ny omaly talata.
Manampy sy manentana ny olon-drehetra amin�ny ady amin�ny aretina SIDA ny Airtel, indrindra fa ny tanora.
Taksibe eto Antananarivo Lasa misy mpaka ra
Niverina indray ny mpaka ra. Renim-pianakaviana iray manodidina ny 55 taona no nisy naka ra tany anaty taksibe omaly maraina tokony ho tamin�ny 7 ora sy 45 minitra raha iny nandray fiara tetsy 67 ha iny handeha hamonjy asa any Bel�Air Talatamaty.
� Vary plastika � eny an-tsena Tsy misy izany, hoy ny minisiteran�ny varotra
Mampiteraka ahiahy amin�ny mpanjifa ny fiparitahan�ny vary hafahafa izay antsoin�ny olona hoe � vary plastika � eny an-tsena amin�izao fotoana izao.
Pasitera Mailhol Homena mari-boninahitra anio
Lanonambe ny an-dry zareo mpino eo anivon�ny fiangonana Apokalipsy anio. Hosalorana ny mari-boninahitra � Commandeur de l�ordre National � mantsy ny filohany.
Firenena inona loatra ?
Vaovao nafampana sy nahasarika ny sain�ny ankamaroan�ny olona omaly ny fitsarana ilay mpanao politika iray nosamborina noho ny savorovoro nitranga tany Soamahamanina, telo volana lasa izay.